သိမှတ်ဖွယ်ရာ ဗဟုသုတ – Page 8 – Khit Lunge
Category: သိမှတ်ဖွယ်ရာ ဗဟုသုတ
ကုသိုလ်ကံအရ ဘုရင်ဖြစ်ခဲ့ပေမယ့်၊ နန်းစံသက်အတိုဆုံး ဖြစ်ခဲ့တဲ့ဘုရင်များ အပိုင်း(၂)
Posted on November 19, 2019 November 19, 2019 by KL
မနေ့က D Nae Khit Media က ကုသိုလ်ကံအရ ဘုရင်ဖြစ်ခဲ့ပေမယ့်၊ နန်းစံသက်အတိုဆုံး ဖြစ်ခဲ့တဲ့ဘုရင်များအကြောင်း အပိုင်း(၁)ကို ဖော်ပြခဲ့ပြီးပါပြီ။ အခု ဒီနေ့ အပိုင်း(၂)ကိုဆက်လက်ပြီး ဖော်ပြပေးမှာပါ။ မနေ့တုန်းက ဆောင်းပါးမှာတော့ နန်းစံသက်အတိုဆုံးတွေကို အစဉ်အတိုင်း ဖော်ပြခဲ့တာပါ။ အခု (၅)ဦးကတော့ လက်ကျန်စာရင်း ဖြစ်ပါတယ်။ (၁) King John I (ပြင်သစ်) နန်းစံသက် (၅)ရက်…
ဆေးလိပ်သမားတွေ ဆေးလိပ်ဖြတ်ချင်စိတ် ဖြစ်သွားစေမယ့် အမျိုးသားတစ်ဦးရဲ့အဖြစ်
ဆေးလိပ်တို့အရက်တို့ဟာ လူကို စွဲလန်းစေနိုင်ပါတယ်။ မစွဲလောက်ပါဘူးကွာ ဆိုပြီး စမ်းသပ်ခဲ့သုတွေဟာ တစ်ချို့ဆို ဆေးလိပ်ဂျိုး၊ အရက်ချိုးကြီးတွေ ဖြစ်နေပါပြီ။ အခု D Nae Khit က ဆေးလိပ်သောက်ခဲ့သူတစ်ယောက်ရဲ့ အလွန်ဆိုးရွားလှတဲ့ အဖြစ်အပျက်လေးကို ပြန်လည်မျှဝေချင်ပါတယ်။ ဒီအကြောင်းကို WorldOfBuzz က ဖော်ပြထားတာပါ။ ဆေးလိပ်သောက်တဲ့သက်တမ်း (၃၀)နှစ်အထိ ရှိခဲ့တဲ့လူတစ်ယောက်ရဲ့အဆုတ်ပုံတွေနဲ့ သတင်းကို ဖော်ပြထားပါတယ်။ အဲဒီအဆုတ်ဟာ ဘယ်လိုဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကို ရှင်းပြဖို့တောင် လိုမယ်မထင်ပါဘူး။…
အသက် ၃၀ ကျော်မှ လက်မထပ်ဘူးဆိုရင် အပျိုကြီးစာရင်းထဲဝင်နေပါပြီ။အဲ့မတိုင်ခင်မှာ အပျိုကြီးဖြစ်တော့မယ့် အခြေအနေ လက္ခဏာတွေဖြစ်နေမှာပါ။ အပျိုကြီးဖြစ်တော့မယ့် မိန်းကလေးတွေမှာ တွေ့ရတတ်တဲ့ လက္ခဏာတွေကို မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်နော်။ (၁) ဇီဇာကြောင်တတ်တယ် တစ်ခုခုဆို ဇီဇာကြောင်တတ်တယ်။ အစားအသောက်ဆိုလည်း ဇီဇာကြောင်တတ်တယ်။ အဝတ်အစားရွေးရင်လည်း ဇီဇာကြောင်တတ်တယ်။ သူတို့ကို တစ်ခုခုပြောလိုက်ရင်လည်း ကန့်လန့်တိုက်နေတတ်တယ်။ အပြောအဆိုကအစ ဇီဇာကြောင်တတ်တယ်။ ကိစ္စသေးသေးလေးကအစ လိုက်ပြောပြီး ဇီဇာကြောင်တတ်ကြတယ်။ (၂) အတွဲတွေကို မြင်ရင်…
ကာမလိမ်လည်မှုဆိုသည်မှာ (သို) အတူပေးနေခဲ့ဖူးတဲ့ ချစ်သူက ပစ်ပြေးသွားတိုင်း ကာမလိမ်လည်မှု ပုဒ်(၄၁၇)မြောက်မမြောက်
Posted on November 18, 2019 November 18, 2019 by KL
ညီမလေးတွေ သိချင်ကြမယ်ထင်လို့ ရှာဖွေတင်ပေးလိုက်ပါ။မိမိ အတူပေးနေဖူးတဲ့ ချစ်သူက ပစ်ပြေးသွားတိုင်း ကာမလိမ်လည်မှု ဖွင့်လို့ရမရ – ရခဲ့ရင်တောင် ဖြစ်လာမယ်အကျိုးဆက် တွေကိုသတိထားမိအောင် ဆက်လက်ဖတ်ရှု့လိုက်ပါအုံးနော် အရမ်းကို သိချင်နေကြတဲ့ ၂ဦးသဘောတူ အိပ်ရန် ယုံအောင်ပြောပြီး ကာမလိမ်လည်မှု-မေးလိုက်ကြတဲ့ကာမလိမ်လည်မှု့အကြောင်း ရာဇသတ်ပုဒ် ၄၁၇ (ကာမလိမ်လည်မှု့)… မိန်းကလေးအတော်များများ သိပ်သိချင်တဲ့ ပြဌာန်းချက် ၂ ဦးသဘောတူ အတူနေပြီးကာမှ တဖက်ကမယူတော့တာနဲ့ ဒီပုဒ်မ နဲ့စွဲမယ်ဆိုတာချည်း လုပ်တော့တာပဲ…(ဒီတော့ကာ)…
အခုအချိန်ထိ သင့်မှာ ချစ်သူကောင်မလေး မရှိရခြင်းရဲ့ အကြောင်းအရင်းများ
ဘဝမှာ ချစ်သူလက်တွဲဖော်ဆိုတာ အရေးပါတဲ့ အခန်းကဏ္ဍတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်လည်း လူတွေဟာ အချစ်ကို ရှာဖွေနေကြတာပေါ့။ အခု အပျိုကြီးလူပျိုကြီး ဖြစ်နေသူတွေလည်း အချစ်ကို ရှာဖွေဖူးကြပါတယ်။ မရှာခဲ့ဖူးဘူးလို့ ညာချင်သာ ညာမယ် ရှာကို ရှာခဲ့ပါတယ်။ တစ်ချို့အပျိုကြီး လူပျိုကြီးတွေဆို အခုထိ ရှာနေဆဲပါဘဲ။ အခုအချိန်ထိ သင့်မှာ ချစ်သူကောင်မလေး မရှိသေးတာဟာ သူတို့အပြစ်မဟုတ်ပါဘူး။ သင့် အပြစ်တွေပါ။ ဘယ်လိုလဲဆိုတာ D Nae…
ဆေးလိပ်သောက်ဖို့ တစ်ကြိမ် တွေးတိုင်း ၄၀၀၀ စုပြီး၊ ပြတ်သွားတော့ (၈၇) သိန်းအထိ စုနိုင်တဲ့ ဖခင်
တရုတ်နိုင်ငံ၊ ထိုင်ဝမ်းမြို့က (၃၇) နှစ်အရွယ် အမျိုးသား တစ်ဦးဟာ ဆေးလိပ်ကို (၂၃) နှစ်ကြာအထိ သောက်ခဲ့ပြီး အကောင်းဆုံး ဆေးလိပ် ဖြတ်နည်းကို တွေ့ရှိသွားခဲ့တာပါ။ သူဟာ အသက် (၁၄) နှစ်မှာ ဆေးလိပ် စသောက်ခဲ့ပြီး၊ တစ်နေ့ကို ဆေးလိပ် (၁) ဗူး ဒါမှမဟုတ် (၂) ဗူး သောက်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ သူဟာ အသက် (၃၇)…
ကုသိုလ်ကံအရ ဘုရင်ဖြစ်ခဲ့ပေမယ့်၊ နန်းစံသက်အတိုဆုံး ဖြစ်ခဲ့တဲ့ဘုရင်များ အပိုင်း(၁)
ဘုရင်ဖြစ်ဖို့ဆိုတာ တော်ရုံပါရမီကုသိုလ်နဲ့ မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ နောက်ပြီး ဘုရင်လိုပဲ သြဇာအာဏာညောင်းတဲ့ အာဏာရှင်ဖြစ်ဖို့ကလည်း ထိုနည်းအတူတူပါဘဲ၊ ကုသိုလ်ကံ အလွန်ကောင်းမှ ဖြစ်နိုင်တာပါ။ မြန်မာပြည်မှာဆိုရင်တော့နန်းစံသက်အတိုဆုံးက ဖောင်းကားစား မောင်မောင်-ပေါ့။ သူကတော့ အလောင်းမင်းတရား မြေးတော်ပါ။ သူဟာ နန်းတက်ပြီး (၇)ရက်အကြာမှာပဲ ဗဒုံမင်းဦးဆောင်တဲ့ တပ်ဖွဲ့က သုတ်သင်တာကို ခံခဲ့ရပါတယ်။ သူကအကြောင်းပြောရရင်တော့ အရှည်ကြီးပေါ့။ အခု D Nae Khit က ဖော်ပြမှာကတော့…
အပြာဇာတ်ကားတွေရဲ. အံအားသင့်ဖွယ် အချက် ၂၅ ချက်ကို သင်သိပြီးပြီလား
များစွာသောလူတွေဟာ အပြာဇာတ်ကားတွေအကြောင်းကို လူကြားထဲမှာပြောဖို့ သိပ်စိတ်မပါလှပါဘူး ၊ ပြောလေ့ပြောထလည်း မရှိကြပါဘူး ။ ဒါပေမယ့်လည်း လူအတော်များများဟာ ဒီလောကအကြောင်း စိတ်ဝင်စားမှု ရှိကြပါတယ် ။ အဲ့ဒီထဲကမှ သင်မသိသေးတဲ့ အပြာဇာတ်ကားတွေရဲ. အံအားသင့်ဖွယ် အချက် ၂၅ ချက် အကြောင်းကို စုစည်းဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ် ။ ၁ – အရွယ်ရောက်ပြီးသူ ဆယ်ရာခိုင်နှုန်းခန့်ဟာ အင်တာနက်ပေါ်ကနေ အပြာဇာတ်ကားတွေ ကြည့်ရှုရခြင်းကို စွဲလန်းနေမိပြီလို့…
ကျွန်တော့်ရုံးရှေ့သို့ ရှေ့ဆင့်နောက်ဆင့်ဆိုသလို ကားသုံးစီးဆိုက်ရောက်လာသည်။ “ဆရာဆီိလာကြတာထင်တယ်”ဟု စကားလက်ဆုံကျနေသည့် အုပ်ချုပ်ရေးမှူးတစ်ဦးကပြော၍ ဝင်လာသည်ကားသုံးစီးကို တချက်ကြည့်မိလိုက်သည်။ သည်နေ့သည်ကား ပျဉ်းမနားစုပေါင်းရုံး၌ မြို့နယ်အတွင်းရှိအုပ်ချုပ်ရေးမှူးများ အစည်းအဝေးရှိရာ အစည်းအဝေးမစခင် ကျွန်တော်ကအရင်ဦးအောင် စုစည်း၍ ရုံးရှေ့၌ပညာပေးဟောပြော‌ဆွေးနွေးနေခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ဝင်လာသည့် ကားသုံးစီးမှ လူအများဆင်းလာကြသည်။ထိုအထဲတွင် ယာဉ်မောင်းဟုယူဆရသည် သုံးဦးသည်လည်း လိုင်စင်နှင့်စာရွက်စာတမ်းများ ထည့်ထားသည့် အဖြူရောင်ပလက်စတစ်အိတ်များကိုကိုင်ကာ ဆင်းလာကြသည်။ ထို့ပြင် ၎င်းတို့ သုံးဦးလက်ထဲတွင် ချလန်စာရွက်လေးများပါ ကိုင်ဆောင်လာကြလေသည်။ မလှမ်းမကမ်းရောက်လာသည်နှင့် အဖြေကိုကျွန်တော်သိလိုက်လေပြီ။…
ဖခင်တိုင်းက သားဖြစ်သူကို ငယ်ရွယ်စဉ်ကတည်းက သင်ပေးထားသင့်တဲ့ ဘဝသင်ခန်းစာများ
Posted on November 17, 2019 November 17, 2019 by KL
ကလေးငယ်တစ်ယောက်ရဲ့ကြီးထွားမှုမှာမိခင်တွေရဲ့အခန်းကဏ္ဍကအင်မတန်အရေးကြီးတယ်ဆိုတာကိုအထွေထွေဗဟုသုတအနေနဲ့လူတိုင်းနားလည်သဘောပေါက်ကြပါတယ်။ဒါပေမယ့် သားတွေနဲ့ပတ်သက်လာရင်တော့ဖခင်တွေလောက်ပိုကောင်းတဲ့စံပြနမူနာထားစရာလူမရှိနိုင်ပါဘူး။ဒီကမ္ဘာကြီးထဲမှာရှင်သန်ရုန်းကန်ရဖို့အတွက်လိုအပ်တဲ့သင်ခန်းစာပေါင်းများစွာကိုသင်ကြားပေးတဲ့မိဘတွေဟာသားသမီးတွေအတွက်တော့ပထမဦးဆုံးသောဆရာ၊ဆရာမတွေဖြစ်ပါတယ်။အခုတစ်ခါမှာတော့သားဖြစ်သူအတွက်ဖခင်တစ်ဦးကနေငယ်စဉ်ကတည်းကမဖြစ်မနေသင်ကြားပေးထားရမယ့် သင်ခန်းစာလေးတွေကိုပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ ၁။ ဘယ်လိုအနိုင်ယူပြီးဘယ်လိုရှုံးနိမ့်တတ်ရမလဲနဲ့ ပတ်သက်လို့အရေးကြီးကြောင်း ရှင်းပြပါ ပြိုင်ပွဲတွေနဲ့ဂိမ်းတွေဆော့ကစားရာမှာတက်တက်ကြွကြွနဲ့ ပါဝင်ဖို့အတွက်ကဖခင်တွေကသာအကောင်းဆုံးကစားဖော်ကစားဖက်တွေဖြစ်ပါတယ်။ပွဲစဉ်တစ်လျှောက်လုံးမှာအားတင်းသည်းခံတတ်ဖို့ကိုသင်ကြာပေးပြီးအောင်မြင်မှုကိုရယူပြီးနောက်မှာတော့အားစိုက်ထုတ်ရတာဘယ်လောက်တန်လဲဆိုတာကိုနားလည်သဘောပေါက်နိုင်ပါတယ်။မတော်လို့အရှုံးနဲ့ကြုံတွေ့ခဲ့ရင်တော့ပထမဦးဆုံးကိုယ့်ကိုနှစ်သိမ့်အားပေးသူဟာဖခင်တွေပါပဲ။ရှုံးနိမ့်လို့လည်းစိတ်မညစ်ဘဲနောက်ထပ်တစ်ကြိမ်ထပ်ပြီးကြိုးစားနိုင်ကြောင်းကိုယုံကြည်အောင်သင်ကြားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ ၂။ အမျိုးသမီးတွေအပေါ် မှန်ကန်တဲ့ ပြောဆိုဆက်ဆံမှုကို သင်ကြားပေးခြင်း အမျိုးသမီးတွေအပေါ်မှာဘယ်လိုပုံစံမျိုးနဲ့ပြောဆို၊ဆက်ဆံရမလဲဆိုတာကို ဥပမာကနေတဆင့်ပြသပေးတာဟာဖခင်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။အမျိုးသမီးတွေနဲ့ပတ်သက်လာရင်သိသင့်သမျှ အ ရေးကြီးအကြောင်းရာတွေအားလုံးကိုသင်ကြားပေးတာကလည်းဖခင်တွေပါပဲ။ ၃။ အချစ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကို ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောကြခြင်း သားဖြစ်သူကိုအချစ်ဟာဘာလဲနဲ့ချစ်မိသွားတယ်ဆိုတာကရောဘာအဓိပ္ပာယ်လဲဆိုတာကိုသင်ပေးပါ။ဒီအရာဟာသားအဖတွေကြားမှာဖခင်ကနေသားဆီကိုလက်ဆင့်ကမ်းပေးနိုင်တဲ့အဖိုးတန် သင်ခန်းစာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဖခင်ဖြစ်သူရဲ့ကိုယ်ပိုင်အ တွေ့အကြုံလေးတွေကိုပြောပြပေးရင်းရှေ့ဆက်လျှောက်လှမ်းဖို့ကိုခွန်အားပေးရာရောက်ပါတယ်။ပြီးတော့အခုလိုမျိုးလေးတွေစကားလက်ဆုံပြောပေးခြင်းသားအဖကြားကဆက်ဆံရေးကိုပိုပြီးခိုင်မြဲပါစေလိမ့်မယ်။ ၄။ ဘယ်လိုပြန်ပြီးတုံ့ပြန်ရမလဲဆိုတာ သင်ကြားပေးပါ သားဖြစ်သူသန်မာလာဖို့အတွက်သင်ကြားပေးဖို့ဆိုတာဖခင်ရဲ့တာဝန်တစ်ခုပါ။မှန်ကန်တဲ့အရာကိုလုပ်ဆောင်ပြီးကိုယ့်အတွက်ကိုယ်ရပ်တည်တတ်ဖို့စိတ်ဓာတ်သန်မာရမှာဖြစ်ပြီးမလိုအပ်တဲ့နေရာတွေမှာလက်သီးမသုံးတတ်အောင်သင်ပေးဖို့ကလည်းလိုအပ်ပါတယ်။ ၅။ ကမ္ဘာကြီးပေါ် သူ့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အမြင်ကို ရှာဖွေနိုင်ဖို့အတွက်…